Kandidà… mpikarama an’ady | NewsMada
Kandidà… mpikarama an’ady
Tsy vaovao fa efa hita sy fantatra ary miharihary ny fisian’ny kandidà… mpikarama an’ady. Sarobabay: izay voa, aza tezitra. Ao ny manao fitadiavana ny firotsahan-kofidina: ny ampahany vola azo ihany no anaovana sarintsarina fampielezan-kevitra, tetehina hamidy amin’ny fihodinana faharoa ny taim-bato kely mba azo…
Tsy vitan’izany, misy ny manao takalo sy tamby fotsiny izao ny vola laniny hoe honerana rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy: homena vahana amin’itsy sy iroa ny tompom-bola. Misy ny mikarama ankitsirano izao amin’ny fanaparitahana vato, na iray fiaviana politika izao aza. Mety ao ambadika ny firenen-dehibe, orinasa goaibe… ?
Ny sasany, karazana kandidà hafakely na hafabe amin’izao fifidianana izao: mirotsa-kofidina mba te hisongadina sy homen-danja amin’izay lazainy sy ataony; eny, na mety ho fandavana sy fanakorontanana ny fifidianana hirotsahany aza no imasoany amin’izany. Tsy misy eritreritra sy faharesen-dahatra hoe ho voafidy eo amin’izany…
Efa nisy, ohatra, ny vaky vava fa mila fanovana ny lalàmpanorenana mialoha ny hirosoana amin’ny fifidianana. Anisan’ny ho tomponandraikitra voalohany amin’izay fanovana izay, hono, ireo kandidà. Izay no nirotsahana ho filohan’ny Repoblika, hahazoana miteny sy manao an’itsy na iroa alohan’ny fifidianana fa tsy fiatrehana izany?
Tsy mahagaga raha mandeha ho azy sy toa mandaitra tokoa ny tsaho etsy sy eroa amin’izao: hahemotra na sakanana, ohatra, ny fifidianana. Tsy vitan’izany, tonga hatramin’ny hoe mbola mila alamina aloha ny korontana, na ny tena ihany aza no toa mamboly izay korontana izay amin’ny fomba rehetra: mirotsa-kofidina sady mandà fifidianana.
Tsy fanorenana ifotony tsy nahazoana olona intsony no takina fa famorehana ifotony no iadiana? Mety ho hitan’ny havany eo indray koa… Mbola ho azo amin’izany ve ny vahoaka? Eny, na ny paipaika politika mivoaka miditra aza. “Amin’ny politika, tsy sakana ny hevi-dravina”, hoy ny amperora frantsay, i Napoléon Bonaparte.